Powdery Mildew: Ọgwụgwọ na Mgbochi Ya - Ọrịa Osisi
Powdery Mildew: Ọgwụgwọ na Mgbochi Ya
Nke mbu: Gini bu Powdery Mildew?
Etu esi amata Powdery Mildew
Mgbaàmà nke Powdery Mildew
Otu esi egbochi ma gwọọ Powdery Mildew
Ngwaahịa kacha mma iji mesoo Powdery Mildew
Vekọ nri gị na ahịhịa gị na-abụkarị ihe ịma aka, mana ọ nweghị ihe na-ewute m karịa mgbe m ga-ebu agha.
Ọ bụ otu n'ime ọrịa ndị kachasị emetụta osisi gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-akọ ubi nwa oge. Ọ bụ ọtụtụ ụdị ero dị iche iche na-eme ka ọcha, ntụ ntụ-ntụpọ pụtara na epupụta na ahịhịa nke osisi gị.
Ọ bụrụ na ị hapụ ya, ọ nwere ike imetụta ahụike nke osisi gị ngwa ngwa, belata uto ahịhịa ha ma gbochie ikike ha ịmị mkpụrụ ma ọ bụ ifuru.
N'ụzọ dị mma, ị nwere ike ịgwọ ya n'ọtụtụ ụzọ, nke m ga-ekpuchi n'okpuru.
Powdery mildew kpamkpam ekpuchi a akwukwo. Ọ ga-agbasa ngwa ngwa na akụkụ nke osisi ma ọ bụrụ na ahapụghị ya. Foto nke Pollinator sere
Mgbe ndị mmadụ na-ezo aka na “mildew powdery”, ha nwere ike ịpụta ọtụtụ ụdị ọrịa osisi na-emetụta ero, agbanyeghị, nke a na-enyo enyo na ọ bụ ya kpatara fransis ndị ọzọ 'iji zụlite bụ Erysiphe cichoracearum, ero nke na-ebusokarị ọgụ skwọsh osisi.
Na agbanyeghị ụdị ero dị iche iche na - emekpa ahịhịa gị, ha niile na - eme otu ihe. Ero ga-agbasakwa n’elu ahịhịa nke osisi gị ma gbochie fotoynthesis na ike osisi nwere ike iji nri na-edozi ahụ. Na-ejideghị ya n'isi ụtụtụ, mmebi ahụ nwere ike ịdị ogologo karịa ịkwụsị, ị ga-ewepụ osisi ahụ n'ubi gị kpamkpam.
Ihe ịrịba ama kachasị nke ọrịa a bụ ntụ ntụ dị iche, uzuzu ọcha nke na-ekpuchi akwụkwọ osisi. Ihe ndị a na-amalite nke obere, mana ha tolitere ka ọrịa a na-eto.
Ọdịiche dị n’etiti nnụnụ na-ata ahịhịa na-ama ihe na-acha nro. isi mmalite
Ọ nwere ike ịdị mfe iji ghagharịa mildew mildew na ọrịa yiri ya, ala na-ebu ala. Gwa ụdị ebu ị nwere, lee anya ebe ọ dị n’osisi. Iri ahịhịa na-eto n’okpuru ahịhịa osisi, ebe ebu nwere ike ipupụta ebe ọ bụla. Igwe na-asọ oyi na-enweghịkwa ọdịdị ntụ ntụ:
Ka ọrịa ahụ na-aga n’ihu, obere ebe ndị na-acha ọcha na-amalite ịmalite ihe yiri mkpọrọgwụ nke na-abanye n’ahịhịa osisi ahụ ma wepụ ha n’ihe oriri. Akwụkwọ ga-agụ agụụ ma malite ịtụ edo edo.
Ọ bụrụ na ọrịa ahụ na-aga n’ihu, epupụta ga-acha aja aja wee nwụọ. Nke a bụ nsogbu zuru oke na ya, mana epupụta na-anwụ anwụ na-emeghekwa osisi gị ruo mbibi nke anwụ, nsogbu nke mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi, yana enwere ike ịmị mkpụrụ kpamkpam.
Nchikota zuru oke nke ihe ojoo na-acha uhie uhie nwere ike isi ike. A na-ebu spores nke ero ikuku site na ikuku nke ikuku. Uzo a gha da n’elu ala osisi wee bido mụta nwa ma ọ bụrụ na ọnọdụ dị mma. Na ọnọdụ mmiri mmiri, ntụ ntụ nwere ike ọ gaghị abụ nsogbu. Otú ọ dị, ụdị ọrịa osisi ndị ọzọ nwere ike itolite n'ọnọdụ mmiri.
Bestzọ kachasị mma iji gbochie mildew powdery bụ:
Họrọ osisi ndị na-eguzogide ọgwụ powdery mildew
Zere ịkụ ụdị dị iche iche na ndò
Jikwaa nsogbu aphid, dịka ha nwere ike iburu spores ahụ n'ubi gị
Nye mmiri ka epupụta na mgbe niile
Wepu ihe osisi a mịrị amị ma ọ bụ ọrịa mgbe ị hụrụ ya
Jiri ọtụtụ ọgwụgwọ ụlọ ma ọ bụ ọgwụgwọ ọkachamara ma ọ bụrụ na osisi gị nwere nsogbu ebu
A na-azụ ahịa dị iche iche iji gwọọ ahịhịa . Ọtụtụ n'ime ndị a bụ fungicides nwere ọla kọpa na-egbu ndị powdery mildew spores.
Otú ọ dị, ọtụtụ ọgwụgwọ ndị ọzọ nwere ike inye nsonaazụ dị mma na ọnụ ala, dị ka:
Achịcha soda na ị na-edina na kichin gị maka isi nri na mmiri nwere ike iji gbochie mgbasa nke ahịhịa ntụ na ubi gị. Naanị gbanye otu ngaji mmiri soda n'otu galọn mmiri.
Tinye ngaji 1/3 nke mmiri na-asa efere iji nyere aka mee ka azịza ahụ rapara na ahịhịa nke ahịhịa ahụ. Echekwala ngwọta fọdụrụnụ. Mee ngwọta ọhụrụ oge ọ bụla ị na-enye ọgwụgwọ maka osisi.
Potassium bicarbonate bụ ngwakọta ntụ ntụ nke nwere ọtụtụ ojiji na nhazi nri, na ngwaahịa ọgwụ na maka ịme mmanya. A nwekwara ike iji onyinye a mee ihe dị ka ọgwụgwọ maka nsogbu eburu ntụ na ahịhịa ubi.
Uru nke iji potassium bicarbonate bụ na onyinye ahụ dị irè megide powdery mildew nke edoberelarịrị, kama mgbochi mgbochi.
ego ole ka okpete choro
Na-asacha ọnụ na ị nwere n'ime ụlọ ọgwụ gị ma ọ bụ na sink gị nwere ike iji mee ihe nwere ntụ ntụ na ubi gị. Na-asacha ọnụ kwesịrị ịdabere na ethanol ma agwakọta ya otu akụkụ nsụcha na mmiri n'akụkụ atọ.
Ebe ọ bụ na a na-emepụta egbugbere ọnụ iji gbuo nje, a ga-eji ya dị ka ihe na-acha ntụ ntụ iji kpochapụ spores nke ga-aga n'ihu mụta nwa ma mebie osisi gị.
Achịcha mmanya n'ụlọ nwekwara ike diluted na iji a powdery mildew ọgwụgwọ. Gwakọta tablespoons mmanya anọ n'otu galọn mmiri ma fesa ya na osisi ọ bụla ụbọchị atọ. Enwere ike iji ihe ngwọta ahụ n'enweghị nsogbu maka ubi nwere mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri.
Otú ọ dị, mmanya bụ ihe acidic na iji ya mee ihe ugboro ugboro nwere ike imetụta ọnọdụ nke osisi gị n'ụzọ na-adịghị mma.
Sọlfọ na sọlfọ ahụ ejirila ọtụtụ afọ gbochie ma kpochapụ ebu na osisi. Enwere ike iji ya na-agwọ ọrịa ahịhịa na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. Enwere ike ịchọta ya na ogige ogige mpaghara gị ma ọ bụ ebe ana-akụ azụ ụlọ.
Ngwaahịa ụfọdụ gụnyere sọlfọ na nzu , nke a na-eche na ọ ga-adị irè karịa na powdery mildew. Agbanyeghị, ogige ndị a nwere ike ịgba anụ anụ ahụ siri ike, yabụ jiri ha naanị dịka etinyere ya na ngwa ohere oge zuru oke iji zere imebi ahịhịa.
A kwadoro mmiri ara ehi maka mildew powdery maka ọgbọ, mana naanị ugbu a ka a na-enyocha sayensị dị na ya. Otu nnyocha chọpụtara na ngwọta nke mmiri ara ehi 10% dị irè megide ebu dịka usoro ndị ọzọ nke ọgwụgwọ . Mmiri ara ehi bụ ụzọ dị ọnụ ala ma zuru oke iji lụso ọrịa osisi ọgụ ma nwee ike iji ya mee ihe ọ bụla n'ubi ọ bụla.
Powdery mildew spores chọrọ ebe na-ekpo ọkụ, nke akọrọ iji mee ka ihe ndị a gbasaa ma gbasaa. Mgbe ọnọdụ dị mmiri mmiri, spores enweghị ike ịba ụba. Idobe osisi ubi gị nke dị ntakịrị mmiri ga-enyere aka igbochi mgbasa nke ahịhịa powdery ebu na ifufe.
** Mara: Ọtụtụ ọrịa osisi ndị ọzọ na-eme nke ọma n’ebe dị mmiri mmiri, yabụ iji mmiri abụghị azịza ogologo oge.
Were mmanụ bu ihe eweputara site na nkpuru osisi mkpuru osisi neem, nke di na India. Ejiri ya dị ka ọgwụ ahụhụ na mgbochi fungal ruo ọtụtụ puku afọ, ọ ka bara uru taa dị ka ihe ndị na-edozi ahụ iji kpochapụ pests ogige.
A na-eji mmanụ Neem ewepu ahịhịa ntụ site na ibelata ikike nke spores iji mụta nwa. A na-atụkarị aro ka ịgba ogige maka ụmụ ahụhụ osisi, mana ọ na-adịkwa irè dị ka ihe eji eme ntụ.
Otú ọ dị, ọ nwere ike ịdị irè dị ka mgbochi karịa dịka ọgwụgwọ mgbe nsogbu ahụ abịala.
Ọ bụ ezie na ebu nwere ike ịbụ nsogbu na-eme isi ike na nke na-akụda mmụọ, usoro ịkọ ugbo nke ọma nwere ike belata ohere nke ịmalite ọrịa a na-enye nsogbu.
Gbalịa ole na ole n'ime ọgwụgwọ ndị dị n'elu ka ị hụ nke kacha mma maka ogige gị.
kedu ka ị ga - esi hapụ tomato
esi wuo ite ite na ite mmiri
kedu ka nkpuru owu
esi tufuo ala cover ata ah u